တှတေ့ာနဲ့ ခကျြခငျြးသတျပဈဖို့ ထုတျပွနျခံထားရတဲ့ငါးမြိုးစိတျအသဈ - MM Live News
ဂြျောဂြီယာနိုငျငံမှာတှခေဲ့တဲ့ ငါးမြိုးစိတျအသဈတဈခုက အားလုံးကို တုနျလှုပျစပေါတယျ။ ရထေဲမှာပဲ အသကျရှငျတတျတဲ့ ငါးတှဟော ကုနျးပျေါမှာ (၅)ရကျလောကျ အသကျရှငျနသေလို အသကျလညျးရှုတဲ့အတှကျ တှတေ့ာနဲ့ကို သတျပဈဖို့ နိုငျငံရဲ့ သားရဲတိရစ်တာနျထိနျးသိမျးရေး ဌာနက ထုတျပွနျလိုကျရတဲ့ငါးပါ။
ဒီငါးကို စတှတေ့ော့ ဂြျောဂြီယာနိုငျငံမှာပါ။ Gwinnett County property အနီးမှာရှိတဲ့ ရကေနျတဈကနျမှာ ကမျးတငျနတေဲ့ ငါးတဈကောငျကိုတှခေဲ့ရပွီး၊ နာမညျကိုတေွာ့မောကျပိုငျးမွှေးဦးခေါငျးငါးလို့ဆိုပါတယျ။ သူ့ကိုသတျခိုငျးရတဲ့အကွောငျးထဲက အထူးဆနျးဆုံးတဈခကျြက ငါးဟာကုနျးပျေါမှာ နနေရေငျးနဲ့ မွှတေဈကောငျလို
သုံးပလေောကျအရှညျထိရှိလာနိုငျလိုပါပဲ။ အဖှဲ့ခြုပျက ထုတျပွနျထားတဲ့ စညျးကမျးခကျြတှမှော လုံးဝပွနျမလှတျပါနဲ့၊ ခကျြခငျြးသတျပဈပါ ဒါမှမဟုတျ အအေးခနျးထဲပဈထညျ့လိုကျပါ။ ဖွဈနိုငျရငျ ငါးရဲ့ပုံကို ဓာတျပုံရိုကျထားပါ။ ဘယျနရောမှာ ဖမျးမိခဲ့တယျဆိုတာကို အတိအကမြှတျထားပေးပါ။ ပွီးတာနဲ့ ဂြျောဂြီယာရဲ့DNR သဘာဝ သားရဲထိနျးသိမျးရေးကို အကွောငျးကွားပါလို့ ဆိုပါတယျ။
ငါးနဲ့ ပတျသကျတဲ့အကွောငျးက ငါးဟာ ကုနျးမွပေျေါရောကျလာတဲ့အခါ ပုံမှနျအသကျရှုတာမြိုးလုပျပွီး ငါးရကျလောကျ အသကျရှငျနိုငျပါတယျ။ သုံးပလေောကျရှညျထှကျလာပွီး၊ မွှခေေါငျးနဲ့ ငါးကနေ တကယျ့ မွှလေိုဖွဈလာပါတယျ။ ပွီးရငျ သူတို့အသကျရှငျဖို့ လိုအပျတဲ့အစာအတှကျ အသားငါးတှကေို ပွနျတိုကျခိုကျပါတယျ။ နောကျဆုံးအခငျြးခငျြးပါပွနျစာပါတယျ။
ခန်ဓာကိုယျမှာ မွှပှေေးကှကျလို အကှကျတှရှေိတဲ့အပွငျ ခေါငျးဟာ မွှတေဈကောငျနဲ့တူလှနျးပွီး ငါးရဲ့အတှငျးပါးစပျဟာ အစှယျပါပါတယျ။ ငါးကိုစားလို့လဲမရသလို လူသားတှကေို အကြိုးပွုတဲ့အခကျြတဈခကျြမှမရှိဘဲ သခြောပေါကျဒုက်ခပဲပေးတာပါ။ ဒီတော့ မွောကျပိုငျး မွှဦေးခေါငျးငါးဆိုတာသခြောပွီဆိုတာနဲ့ သတျပဈဖို့လိုပွီး၊ အဆငျပွရေငျတော့ ရခေဲထဲထညျ့ထားဖို့ကို DNR က ထုတျပွနျထားပါတယျ။
ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ ငါးမျိုးစိတ်အသစ်တစ်ခုက အားလုံးကို တုန်လှုပ်စေပါတယ်။ ရေထဲမှာပဲ အသက်ရှင်တတ်တဲ့ ငါးတွေဟာ ကုန်းပေါ်မှာ (၅)ရက်လောက် အသက်ရှင်နေသလို အသက်လည်းရှုတဲ့အတွက် တွေ့တာနဲ့ကို သတ်ပစ်ဖို့ နိုင်ငံရဲ့ သားရဲတိရစ္တာန်ထိန်းသိမ်းရေး ဌာနက ထုတ်ပြန်လိုက်ရတဲ့ငါးပါ။
ဒီငါးကို စတွေ့တော့ ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံမှာပါ။ Gwinnett County property အနီးမှာရှိတဲ့ ရေကန်တစ်ကန်မှာ ကမ်းတင်နေတဲ့ ငါးတစ်ကောင်ကိုတွေ့ခဲ့ရပြီး၊ နာမည်ကိုတော့ မြောက်ပိုင်းမြွေးဦးခေါင်းငါးလို့ဆိုပါတယ်။ သူ့ကိုသတ်ခိုင်းရတဲ့အကြောင်းထဲက အထူးဆန်းဆုံးတစ်ချက်က ငါးဟာကုန်းပေါ်မှာ နေနေရင်းနဲ့ မြွေတစ်ကောင်လို
သုံးပေလောက်အရှည်ထိရှိလာနိုင်လိုပါပဲ။ အဖွဲ့ချုပ်က ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေမှာ လုံးဝပြန်မလွှတ်ပါနဲ့၊ ချက်ချင်းသတ်ပစ်ပါ ဒါမှမဟုတ် အအေးခန်းထဲပစ်ထည့်လိုက်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ငါးရဲ့ပုံကို ဓာတ်ပုံရိုက်ထားပါ။ ဘယ်နေရာမှာ ဖမ်းမိခဲ့တယ်ဆိုတာကို အတိအကျမှတ်ထားပေးပါ။ ပြီးတာနဲ့ ဂျော်ဂျီယာရဲ့DNR သဘာဝ သားရဲထိန်းသိမ်းရေးကို အကြောင်းကြားပါလို့ ဆိုပါတယ်။
ငါးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းက ငါးဟာ ကုန်းမြေပေါ်ရောက်လာတဲ့အခါ ပုံမှန်အသက်ရှုတာမျိုးလုပ်ပြီး ငါးရက်လောက် အသက်ရှင်နိုင်ပါတယ်။ သုံးပေလောက်ရှည်ထွက်လာပြီး၊ မြွေခေါင်းနဲ့ ငါးကနေ တကယ့် မြွေလိုဖြစ်လာပါတယ်။ ပြီးရင် သူတို့အသက်ရှင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အစာအတွက် အသားငါးတွေကို ပြန်တိုက်ခိုက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအချင်းချင်းပါပြန်စာပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်မှာ မြွေပွေးကွက်လို အကွက်တွေရှိတဲ့အပြင် ခေါင်းဟာ မြွေတစ်ကောင်နဲ့တူလွန်းပြီး ငါးရဲ့အတွင်းပါးစပ်ဟာ အစွယ်ပါပါတယ်။ ငါးကိုစားလို့လဲမရသလို လူသားတွေကို အကျိုးပြုတဲ့အချက်တစ်ချက်မှမရှိဘဲ သေချာပေါက်ဒုက္ခပဲပေးတာပါ။ ဒီတော့ မြောက်ပိုင်း မြွေဦးခေါင်းငါးဆိုတာသေချာပြီဆိုတာနဲ့ သတ်ပစ်ဖို့လိုပြီး၊ အဆင်ပြေရင်တော့ ရေခဲထဲထည့်ထားဖို့ကို DNR က ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
စူပါ တိုငျဖှနျး မုနျတိုငျးကွီးဒဏျကွောငျ့ အမှိုကျပုံ ဖွဈသှားတဲ့ ဂပြနျနိုငျငံ
ခေါငျးခဏခဏ ကိုကျနသေူမြားအတှကျ လကျတှေ့ နညျးလမျးကောငျး…
ထိုင်းဘုရင် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်တွင် မြန်မာအပါအ၀င် အကျဉ်းသားပေါင်း ၃၀၀၀၀ ကျော် လွတ်မြောက်….
May 14, 2019 MM Live
အချစ်တပွဲ ပစ်ပွဲနဲ့ ဇတ်သိမ်း (ရုပ်/သံ)
December 26, 2018 MM Live
ပုဏ္ဏက တိုက်နေတဲ့အိမ်က မီးတိုက်နေသူ အာဠာဝကဘီလူးအား ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့ ရုပ်သံမှတ်တမ်း….
April 20, 2019 MM Live